स्वतन्त्र चिन्तनद्धारा मात्र कुनै कुरा स्वीकार गनुपर्ने बुद्धको उपदेश – Maitri News
स्वतन्त्र चिन्तनद्धारा मात्र कुनै कुरा स्वीकार गनुपर्ने बुद्धको उपदेश
maitrinews July 14, 2019
मानिसहरु अन्य देवी देवतासमान तथागत बुद्धको पनि पुजा अर्चना गर्दछन् । तर बुद्धंले कहिल्यै आफ्ना शिक्ष्यहरुलाई मेरो पूजा गर्नुपर्छ, मैले जे भने त्यही गर्नुपर्छ भनी भन्नु भएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, कुनैपनि कुराको आत्मसाथ गर्नुुभन्दा पहिले त्यसलाई तर्कको कसिमा परिक्षण गरेर हेर्नु कि त्यो सवैको हितमा छ कि छैन । अर्थात् कुनै व्यक्ति या वर्गको हितको लागि कुनै अरु व्यक्ति या वर्गको अहित गर्नु गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन ।
बुद्धले आफ्ना अनुयायीहरुलाई स्वतन्त्र रुपले चिन्तन गर्नु पर्ने शिक्षा दिनुभएको छ । यसै सन्दर्भमा उहाँले कलाम समुदायहरुलाई उपदेश दिँदै भन्नुभएको छ , “हे कलामहरु, कुनै कुरालाई यसकारण नमान कि त्यो तिमीले सुनेको हो , तिमीले यस कारण पनि नमान कि कुनै कुरा परम्पराबाट चल्दै आएको हो, कुनै धर्मग्रन्थमा लेखिएको छ भन्दैमा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तिमीले यस कारण नमान कि त्यो न्याय शास्त्र अनुसार छ । कुनै कुरा यस कारण नमान कि माथिबाट हेर्दा त्यो मान्य प्रतीत लाग्छ, कुनै कुरालाई यस कारण नमान कि त्यो हाम्रो विश्वास या हाम्रो दृष्टीको अनुकूल छ । कुनै कुरा यसकारण नमान कि त्यो कुन आदरणीय आचार्य द्वारा भनिएको हो ।”
त्यसपछि कालामहरुले त्यसोभए के गर्नुपर्छ भनेर सोधेको प्रश्नमा उहाँ पुनः भन्नुहुन्छ ,“तिमीहरु सर्वप्रथम स्वयं आफूसित प्रश्न गर कि के यो कुरा स्विकार गर्नु हितकर छ ? के कुरा गर्नु निन्दनीय छ ? के यो कुरा बुद्धिमानहरुबाट निर्देशित हो, के यस कुराले कष्ट अथवा दुःख निम्त्याउँछ कि सुख । यदि कुनै कुरा तृष्णा, घृणा ,मूढता ,र द्वेषको भावनाको वृद्धिमा सहायक त होइन । यी सम्पुर्ण तथ्यहरु मनन् गरी आफ्नो साथै अरुको पनि भलो गर्छ भने मात्र कुनै कुरा स्वीकार्य हुन्छ । यसरी बुद्धले आफ्नो सिद्धान्त कहिल्यै कसैमाथि लाड्नु भएन ।
Previous Previous post: सेरेनालाई हराउँदै सिमोनाले जितिन् विम्बल्डन टेनिसको उपाधि
Next Next post: भारतीय दबाबका कारण सप्तकोशी ब्यारेजका ३० ढोका बन्द गरिए, नेपाललाई ठूलो क्षति हुने सम्भावना